Goobta & Hotelka Uu ka Dhacayo Kulanka Labada Madaxwayne Ee Trump & Kim John-un.(Sawiro) | Awdalmedia.com
Goobta & Hotelka Uu ka Dhacayo Kulanka Labada Madaxwayne Ee Trump & Kim John-un.(Sawiro)
Kulanka sida wayn loo wada sugayo ee lagu wado inuu dhex maro madaxwayne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka dhici doona jasiirada Sentosa, waxaa sida uu xaqiijiyay aqalka cad.
Xoghayaha saxaafada ee aqalka Sarah Sanders ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitarka waxa ay ku xaqiijisay in kulanka uu ka dhici doono huteelka lagu magacaabo Capella Hotel.
Kulankani oo lagu wado in uu qabsoomo 12 June ayaa waxaa laba toddobaad ka hor baajiyay Mr Trump balse markii dambe la sheegay in uu sii socon doono ka dib xiriiro ay sameeyeen labada dhinac.
Mr Trump ayaa Talaadadii sheegay in”wax waliba ay si dhaqso ah u socdaan”.
Mareykanka ayaa doonaya in kuuriyada Waqooyi gabi ahaanba ay ka talabaxdo hubka niyukleerka.
Kulankani ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay ee dhex mara hogaamiye kuuriya Waqooyi ka socda iyo madaxwayne Mareykan ah.
Dhinaca kale, Waaxda Duullimaadka ee dalkaasi ayaa maanta shaacisay Ogeysiis Duulliyayaasha loogu sheegayo in Hawada dalkaasi laga xayiri doono Diyaaradaha muddada uu socdo Kulanka Taariikhiga ee la filayo inay Madaxweyne Donald Trump iyo Hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya, Kim Jong Un bishan 12-da ku yeeshaan Jesiiradda loo dalxiis tago ee Sentosa Island oo ku taalla Koonfurta dalka Singapore.